Plato - Games & Group Chats 1.8.2 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.8.2 လြန္ခဲ့ေသာ6ရက္က
Application မ်ား လူမႈေရး Plato - Games & Group Chats
Plato - Games & Group Chats ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သင်ရုံပလေတိုကိုတွေ့! ကျနော်တို့ 30+ ကျော်အုပ်စုတွင်ဂိမ်းနဲ့ချက်တင် app ကိုပါပဲ။ သငျသညျကောငျးမှကုမ္ပဏီအတွက်ပါပဲဒါကြောင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှသန်းကျော်လူများ, ပျော်စရာရှာဖွေမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဖြစ်စေတစ်ဦးချင်းစီလပလေတိုကိုအသုံးပြုပါ။
30+ Group မှဂိမ်းများ
ဟုတ်တယ်, အဲဒါပဲညာဘက်ပါပဲ။ , စားပွဲတင်ဘောလုံး, Werewolf, ရေကူးကန်, Ocho, Mini ကိုဂေါက်, Bankroll, ကွံတစ် Row ထဲမှာ 4, ပင်လယ်ပြင်တိုက်ပွဲ, Hold'em Poker, မြေမြှုပ်မိုင်း, Go ကိုငါး, BS, ဖုတ်ကောင် !, အတူတကွ Draw: ပလေတိုအပါအဝင် 30 ကျော် multiplayer ဂိမ်းရှိပါတယ် အစက် & သေတ္တာ, Ludo, စာပေ, စစ်တုရင်, Big နှစ်ဦး, Gin Rummy, အန်စာတုံးပါတီ, ဒိုမီနို, ရော့ခ်ကတ်, မှောင်ခိုတင်သွင်းမှုများ Den, Checker, Reversi, ဂေါ်ပြား, Backgammon, Go ကို, နှလုံး, Baloot နှင့် Euchre ။
ငါတို့သည်သင်တို့သင့် privacy ချင်ငါသိ၏။ ကျနော်တို့ပလေတိုသုံးစွဲဖို့ e-mail လိပ်စာသို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်တောင်းကြဘူးဒါကြောင့်ပါပဲ။ Plus အား, သင့် 1: သူတို့လက်သို့အပ်ရတစ်ချိန်က 1 ပြောဆိုမှုများကျွန်တော်တို့ရဲ့ server များပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားရပါဘူး။
အဖွဲ့များ အတွက်အတူတကွ Get
ပလေတို play အထိ 100 သူငယ်ချင်းအုပ်စုတစ်စုကိုစုသိမ်းခြင်းနှင့်အတူတူ chat ဖို့လွယ်ကူစေသည်။ သငျသညျဖြစ်စေ Real-time အကြောင်းကြားစာများနှင့်အတူတစ်ဦးမက်ဆေ့ခ်ျကိုလက်လွတ်ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်သွယ်ပွဲစားစနစ်အား အသုံးပြု. အခြားစစ်မှန်သောလူတစ်ဦးနှင့်အတူတက်တွဲတစ်ခုသို့မဟုတ်ကစားသမား-run ပြိုင်ပွဲ join Get ။ သငျသညျအလုံအလောက်ကောင်းသောဆိုရင်သင့်အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းထဲမှာတက်မြင့်နေချိန်တွင်, သင်ဦးဆောင်တက်နိုင်ပါတယ်။
လူတွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏အခုအချိန်မှာအွန်လိုင်းဖြစ်ကြပြီးပလေတိုအများပြည်သူချက်တင်ခန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့များစွာမဆိုတဆင့်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်တွေ့ရှိရန်လွယ်ကူစေသည်။ ရေခဲ Breaking ဖော်ရွေဂိမ်းနှင့်အတူလွယ်ကူသည်။
ယခုဖတ်နေရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ကစားခြင်းနှင့်အတူတကွ chatting စတင်ရန်အချိန်ပါပဲ။ အခမဲ့ပလေတို Install, ကောင်းမကောင်းကိုကြိမ်သွားရကုန်အံ့။
မေးခွန်းတစ်ခုရှိပါသလား? hello@platoapp.com မှာကျွန်တော်တို့ကို e-mail, ငါတို့သည်သင်တို့ထံမှစကားကိုနားထောငျဖို့ကိုချစ်ချင်ပါတယ်။
Plato - Games & Group Chats အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Plato - Games & Group Chats အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Plato - Games & Group Chats အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Plato - Games & Group Chats အား အခ်က္ျပပါ
superuser4k စတိုး 46.68k 28.14M
Plato - Games & Group Chats ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Plato - Games & Group Chats အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.8.2
ထုတ်လုပ်သူ Plato Team Inc.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.platoapp.com/privacy
လက်မှတ် SHA1: 82:C6:1D:FC:4A:63:A8:02:AC:CF:A0:BE:61:34:A3:BF:87:C2:B7:96
အဖွဲ့အစည်း (O): Plato Team Inc
Plato - Games & Group Chats APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ